दक्षिण अष्ट्रेलियामा उदाहरणिय बन्दै नेपाली समुदाय,सुरु गरे प्रविधियुक्त सामूहिक तरकारी खेती (फोटो/भिडियो) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०७६, आईतवार May 6, 2019
अष्ट्रेलिया । एङलभेल ,एडेलेड । दक्षिण अष्ट्रेलियाको’ एङलभेल’भेगमा नेपालीहरुले सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन् । १० जनाको समूह मिलेर १० एकर्ड जग्गामा नेपाली समुदायका समुदायको एक समुहले खेति शुरु गरेको सो समुह मध्येका एक दीपक विष्ट असनेपालन्युजलाई बताउंनु हुन्छ । उक्त समूहको स्वामित्वमा २६ एकर्ड जमिन रहेको छ जस मध्ये १० एकर्ड जमिन प्रयोगमा ल्याएर तरकारी खेती सुरु गरेका छन् ।
उक्त तरकारी खेतीमा खुर्सानी, लौका, फर्सी लगायत विभिन्न प्रजातीका तरकारीहरु उत्पादन हुने गरेका छन् । विदेश गएर नोकरी नै गर्ने या अरुको नै काम गर्ने भन्ने नेपालीहरुको भावनालाई चिर्दै उनिहरुको टोलीले तरकारी खेती सुरु गरेको समुहका अर्का सदस्य आनन्द बख्रेल असनेपालन्युजलाई बताउंनु हुन्छ । । उक्त खेतीवाट १० जना भन्दा बढि रोजगार समेत भएका छन् ।सामुहिक रुपमा केहि नयाँं कार्य गर्नको लागि आफुहरूले यस्तो पहल गरिएको समुहका अर्का एक सदस्य डा कुश कुमार श्रेष्ठ बताउंनु हुन्छ ।
यहाँवाट उत्पादन हुने सबै तरकारी आर्गनिक नै रहने गरेको छ भने कुनै पनि रासायनिक मल विषादीको प्रयोग गर्ने नगर्ने गरेको उनको दाबी छ । दक्षिण अष्ट्रेलियाको मुख्य अर्थतन्त्रमा कृषी रहेको छ । यहाँको मुख्य अर्थतन्त्रलाई मध्येनजर गर्दै नेपालीहरुको सहकार्यमा खेती सुरु गरिएको उनले बताए । यो क्षेत्रलाई खेति मात्र हैन , नेपालको पहिचान , अध्यात्मिक बिकास र पूर्वीय विज्ञानको प्रवर्द्दनस्थल बनाउंदै लैजाने योजना बनाइरहेको सो समुह मध्येका एक आचार्य राजन शर्मा बताउंनु हुन्छ । यो क्षेत्रमा गौ पालन , योग विध्यालय , योग रिट्रिट समेतको तयारी गरिरहेको उहांको भनाइ छ ।
भिडीयोमा हेरौं यो सम्पूर्ण विवरण ।
कस्तो छ तरकारी खेतिको प्रतिफल ?
नेपालीले अष्ट्रेलियामा सामुहिक तरकारी खेती सुरु गरेको यो पहिलो पटक हो ।उनिहरुको टोलीले ग्रिन हाउस र ओपान रुपमा खेती सुरु गरेका छन् । लागानी ठूलै रुपमा लागेपनि सिक्ने क्रममा नै रहेकोले नाफाको बारेमा त्यती नसोचेको उनले बताए ।
देख्दा त्यस्तो नदेखिएका पनि प्रविधीवाट जरामा नै पानी पुग्ने बनाएको र पहिला त तरकारी खेती हेर्न आउने नेपाली समुदायहरुलाई कोसेलीको रुपमा नै दिने गरेका बताए । तरकारीमा नयाँ प्रविधीहरु देख्न सकिनेछ । एक त प्रत्येकको जरामा पानी पुग्नेछ भने विरुवाको थप सुरक्षा र पानीको मात्र वाफ बनेर नउडोस भनेर वरिपरि पलाष्टिकले बेरिएको छ । सम्पूर्ण तरकारी खेतीको लागत अष्ट्रेलियन डलर एकलाख लागिसकेको र थप रकम अझै लाग्ने विष्टले बताए ।
नेपालमा नी यस्तो प्रविधि खेतीको सम्भावना छ ?
दक्षिण अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुले सुरु गरेको प्रविधि युक्त तरकारी खेतीको सुरुवात नेपालमा धैरै मात्रामा सुरु नभएपनि यसको सम्भावना बने राम्रो नै रहेको छ । नेपालवाट कोरिया, अष्ट्रेलियामा गएर तालिम लिएर तरकारी खेती सुरु भएको विष्टले बताए । संगठानिक रुपमा जुटेर खेती गर्दा नेपालमा पनि सम्भावना रहेको तर यसमा लागानी भन्दापनि ज्ञानको अवश्यकता रहेको बताए ।